Ny marketing ara-tsosialy dia momba ny sosialy fa tsy ny media | Martech Zone
Ny marketing ara-tsosialy dia momba ny sosialy fa tsy ny media
Alarobia, Martsa 10, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Fitaovana ny sehatra media sosialy. Rindrambaiko ny sehatra media sosialy. Misy fitaovana sy rindrambaiko hafa koa any. Hisy fitaovana tsara kokoa eo an-joron-trano.
Tsy maninona ny Twitter. Tsy maninona ny Facebook. Tsy maninona ny LinkedIn. Tsy maninona ny bilaogy. Izy rehetra dia manampy antsika hanakaiky kely fotsiny izay tena tadiavintsika.
Ny tena tadiavintsika dia ny fahamarinana.
Ny tena tadiavintsika dia ny fahatokiana.
Ny tena tadiavintsika dia ny hahatakatra.
Ny tena tadiavintsika dia fisakaizana.
Ny tena tadiavintsika dia Vonjeo.
Ity volana ity dia iray volana lehibe ho an'ny iray amin'ireo namako akaiky amin'ny teknolojia. Izy dia mamindra ny orinasan-tseraserany avy any Indiana mankany California. Hiditra ao am-pon'ny The Valley izy miaraka amin'ireo saina maranitra hafa izay nampitombo ny fampiharana media sosialy azy ireo. (Ie, somary saro-piaro aho).
Ny fampiharana izay naorin'ny ekipany dia tsotra (toy izany koa ny Twitter!) Saingy tonga ao am-pon'ny olona izany tena maniry. Manamora izany izy ireo. Ny lampihazo no fomba tsotra hahatongavana amin'ny tapany sosialy. Tsy dia ataoko ambanin-javatra ny talenta sy sary an-tsaina tsy nampoizina nalainy mba handefasana fampiharana mahafinaritra toy izany, tsy misy isalasalana. Fa ny lazany dia noho ny fahafahan'ny fampiharana. Izy io dia ahafahana miditra amin'ny fiaraha-monina izay mbola tsy hitantsika.
Mampianatra ny mpanjifa sy ny mpanjifa momba ny teknolojia aho mba hahafahantsika mampiasa azy tanteraka sy hampitombo ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina. Ka rehefa manontany ahy ny mpanjifa hoe: "Ahoana no hahazoako bebe kokoa [ampidiro ireo mpanaraka, mpankafy, mpamandrika, buzz, retweet], Somary mitebiteby foana aho. Raha tsy orinasam-piaraha-monina ny orinasanao, raha tsy miraharaha ireo mpanjifanao ianao, raha tsy manoratra atiny mahafinaritra, raha tsy manana vokatra tsara, raha tsy manana olona manokana, raha ' tsia miavaka… Dia tsy hahasoa anao ny isa marobe.
Hoy hatrany aho…. Fanamafisam-peo ny media sosialy. Raha tsy manan-javatra hampitomboina ianao dia tsy hanampy ny amplifier lehibe indrindra eto an-tany! Atsaharo ny fikarohana ireo manam-pahaizana amin'ny haino aman-jery sosialy lehibe kokoa sy tsara kokoa hanohizany hanangana fanamafisam-peo lehibe kokoa ho anao. Izay ampitomboin'izy ireo no mahasamihafa azy.
Mitovy amin'ny olona tsy mahay mihira mangataka antsika hameno kianja io. Rehefa avy mameno ny kianja isika dia ahoana? Raha tsy afaka mihira ianao dia tsy nanana orinasa nivarotra tapakila tokana izahay! Ny olona toa ahy dia afaka mitaona ny olona hiseho amin'ny kaonseritra… avy eo anjaranao no manao fampisehoana!
Ka… ajanony ny fangatahana ahy hanome anao bebe kokoa raha tsy zakanao ny ananao izao. Raha tsy miara-miasa aminao ireo mpanaraka anao 500, ahoana no hanatsaranao 5,000 bebe kokoa ny valiny? Ity misy torohevitra iray… vokany folo heny ny vokany.
Folo folo aotra dia aotra.
Andro vitsivitsy dia tsy ho eto ny Twitter, tsy ho eto ny Facebook, tsy ho eto ny LinkedIn… ary hiara-hiasa amin'ireo fantsona vaovao izay mety hanohy hanamora ny zavatra fotsiny isika. Ireo sehatra media vaovao ireo dia mbola tsy afaka mamaha ireo olana fototra manohitra ny paikadinao. Aleo aloha amboarintsika ireo.
Tags: haino aman-jery sosialySocial Media Marketing
Mikasa ny drafitra ny drafitra ho an'ny haino aman-jery sosialy
Mampita ny lalananao mankany amin'ny fahombiazana
Mar 10, 2010 ao amin'ny 1: PM PM
Araka ny voalazan'ny fehezanteny malaza hoe "Raha tsy mikasa ny hanao drafitra ianao dia mikasa ny tsy hahomby". Ny tiako holazaina dia hoe: tsy afaka mahita fahombiazana amin'ny tambajotra sosialy sy orinasa ianao raha tsy manana drafitra miorina tsara hanomezana vola ny ezaka ataonao. Tiako rehefa miteny ianao hoe "amplifier dia manampy ny media sosialy", manaiky tanteraka izany aho!
Ka ny torohevitro dia ny drafitra ny paikadin'ny media sosialy, manorena fifandraisana matanjaka ary ampitomboy ny taham-panovana anao!